Mabasa - DataNumen
Kugamuchirwa kunzvimbo inonakidza uye yekugadzira yebasa, uko kuri vanhu vanoita mutsauko.
At DataNumen, isu tinoziva kuti kubudirira kwedu kunobva kune vedu vasingashande vashandi-timu yevanamato vane hunyanzvi, vanokurudzirwa zvakanyanya, vanoshanda pamwechete kuendesa mhinduro dzekugadzirisa dhata dzinobatsira vanhu kana dambudziko redata rikaitika. Tine shungu nezve zvatinoita uye kuti tinozviitira ani, uye nechido ichocho chinouya chinangwa.
Seboka, isu tinoramba tichitsvaga nzira nyowani uye nehunyanzvi dzekuzadzisa zvido zvevatengi vedu nekushandisa bhizinesi redu.
Basa redu riri nyore: gadzira zvigadzirwa zvakanaka zvinobatsira vanhu kudzoreredza dhata ravo zvakanyanya. Yedu yekubatira nzvimbo nharaunda inotigarisa takatarisa uye pamwe chete kuzvipira kuzadzisa ichi chinangwa. DataNumenTsika dzinobatanidza kusiyana kwemazano, mararamire, ruzivo rwehunyanzvi uye maonero ehukama. Isu tinodada nezvatinoita uye tinogara tichitsvaga vanhu vane shungu kuti vabatsire kuchengeta bhizinesi redu richikura.
Kufarira kujoina timu yedu? Wona mabasa edu pazasi uye shandisa nhasi.